तयार परौं : मन्त्री फेरिने लगन हुन लाग्यो | मझेरी डट कम
HomSuvedi — Tue, 09/10/2013 - 06:09
के चाल परेर हो कुन्नि मन्त्रीहरू फेरिन यसपालि अलिक ढिलो भइसक्यो । दुईदुई महिनामा फेरिनु पर्ने हो । खै किन ढिलो भएको हो कोनि । यसपालिका कुकुर समेत बियाइसके के चालले हो कुन्नि मन्त्री फेरिएनन् । अचम्म लाग्छ । जनताहरूलाई बढो खल्लो लागिरहेको छ । अरुभन्दा पनि अबिर, फिता, दोसल्ला, दोलाइँ आदिका बेपारीहरूका भने अलिक मन्दीका दिन आएका छन् । मन्त्री नफेरिंदा बिक्रीबट्टामा मन्दी छ । मंसिरको चुनाव सकिगयो अब अर्को चुनाब आउँन बाँकी नै छ । चुनाबमा पर्चा छापेर केही कमाइधमाइ गरी खाएका प्रेसहरूले चुनाब नआउने देखेपछि फिता, कैंची, थाली आदिको बेपार गरेर केही भए पनि खायोजियोको बाटो गर्दै आएका थिए त्यसमा पनि यता केही दिनदेखि मन्त्रीहरूको कार्यक्रममा कमी आएकाले उनीहरूको बेपारमा घाटो पडेको छ । तर नआत्तिनुहोला, अब फेरि मन्त्रीहरू फेरिने हल्ला आएका छन्, मन्त्री फेरिनु भनेको बिहे र वर्तमानको लगन जस्तो होइन क्यारे । मौका पर्नासाथ फेरिइहाल्छन् । कसैलाई धम्की दिन पनि मन्त्री फेरिदिन्छु भनेर हल्ला पिटाइन्छ । उनीहरू फेरिएपछि सचिब, महाप्रबन्धक, हाकिम लगायतका सबै फेरिइहाल्छन् । अनि उनीहरूको काम उद्घाटन, शिलान्यास, विमोचन, भाषण र फिता कटान न हुन्छ । लगनका लागि सुन स सिन्दुरपोतेको बेपार भएझैं मन्त्री फेरिएको बेलाका लाागि मजाका रिबिन, कैंची, दोलाइँ, दोसल्ला, ममबत्ती, सलाई आदिको राम्रै बेपार हुने मौका आइहाल्छ । यसैले आत्तिने काम छैन । बेपारमा कहिले मन्दी कहिले चढ्ती हुनु ता जायजै न हो । बरु अब फेरि नयाँ मन्त्रीहरू आएपछि पहिले मन्त्रीक्वाटर सिँगार पेटार गर्नेले तयार हुनुहोला । नयाँ नयाँ स्वकीय सचिबका दाबेदारहरू तयार हुनुहोला । प्रेस सल्लाहकारहरूले पनि लगन हुन आँटेको बुझेर तयारी गरिराख्नु होला । मन्त्री फेरिन ढिला हुने छाँट आयो भने तयार पारिराखेका बन्दकर्ताको कोटामा बन्दकर्ताहरू भर्ना गरिराख्नुहोला । ढिलो हुन लागे उनीहरूलाई केही टायर र केही लढ्ठीको बन्दबस्त गरेर काम फत्ते गराउनु होला । उनीहरूलाई उक्साएपछि मन्त्री फेरिन के बेर ! यो बमका बारेमा ता म उति भेउ पाउँदिन । त्यसबारे आफैं सोच्नुहोला ।
केही लठ्ठैतरुपी भ्रातृसङ्गठनलाई पनि तयारी पारिराख्नुपर्छ । गाउँ नगरमा मेरो पकड छ भन्ने कुराको देखावाका लागि केही मुन्द्रेहरू भर्ना गरिराख्नु राम्रो हो । एन.जी.ओ.हरूले पनि मन्त्री फेरिएको मौकाको सदुपयोग गर्न सचेत हुनु राम्रो हो । लगन हुनै आँटेको छ । लगन आउँछ, पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन । कविहरूले कविताको पुस्तक विमोचनका लागि तयार हुनुप¥यो, अनि गजलकारले पनि । पुरस्कारदाताहरूले पनि पुरस्कार बाँड्न तयार परेर बस्नुहोला । हतार गर्नु छैन । नयाँ मन्त्रीको हातबाट फिता कटाएर, विमोचन गराएर, उद्घाटन गराएर आफ्नो अनुहार टेलिभिजनमा हेर्नु मात्र होइन लाभ हासिल गर्नु छ । एनजीओहरू छलफलका लागि विषय तयार पारिराख्नुहोला । गोष्ठीको उद्घाटन गरेर लाभ लिन पल्ःकेकाहरूले पनि नयाँ मन्त्री सचिबका हातबाट त्यो उद्घाटन गराएर केही न केही हासिल गर्न सहज पर्नेछ ऋषि धमलाजीले पनि तयार भएर बसिरहनु राम्रो हो ।
लगन पोते हुनासाथ गोष्ठी उद्घाटन हुनेछन्, मन्त्रीहरूले मन्तव्य प्रकट निहुँमा भाषणको विष्टा जनताको कानमा बिस्ट्याउनेछन् । गोष्ठीको ठेक्कापट्टा लिएका क्लबहरूले गोष्ठीका लागि उपयुक्त शीर्षक छानिराख्नुहोला । दोसल्ला ओढाउने काममा लागेर जीविका चलाएकाहरूले पनि फेरिने मन्त्रीहरूका लागि दोसल्लाको जोहो गरिराख्नु होला । दमला, अमला, कमलाजीहरूले नेपालीहरूका थाप्लामा कति रिन छ, नेपालीहरूलाई कस्तो लँगौटी उपयोगी हुन सक्छ, एक नेपालीलाई कति चुस्न सकिन्छ, चन्दाको आतङ्कलाई घरघरानमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, नेपालीले सल्लाको खोटो र दियालो कुन मुलुकबाट ल्याउँदा सरकारलाई फाइदा र मन्त्रीलाई कमिसन मिल्छ, अब नेपालीहरूले कस्तो साइजको टुकी बाल्नु पर्ने हो, कुन जलविद्युत आयोजनामालाई नजिकैका बाँदरे सेनाहरू भीडाएर बन्द गर्दा कति फाइदा हुन्छ भन्ने जस्ता विषयहरू तयार पारेर राखिछाड्नुहोला । पछिबाट विषयको कमीले लाभ लिन नसकिएला नि !
यसबाहेक बाँदर अधिकार आयोगमा कार्यरत बाँदर अधिकार कर्मीहरूले पनि मौकाको फाइदा उठाउन बिर्सनुहुँदैन । अब फेरि बटन अन गर्ने बेला आएको छ । रिबन काट्ने बेला आएको छ । टेलरिङ्हाउसहरू, अबका मन्त्रीलाई दौरा सुरुवाल चाँहिंदैन । अब ता धोती, कुर्ता, सेरबानी, टाइसुटको बन्दोवस्त गरिराख्नुहोलो । अनावश्यक किसिमका लुगाहरू सिलाएर फजुल खर्च नगर्नु होला । बरु मन्त्रीक्वाटरका पर्दाहरू सिलाइराख्नुहोला । सोफाबेपारीहरूले सोफा तयार गर्नुहोला, पलङ कताबाट ल्याउने हो त्यो कुरा मौकामै बुझिराख्नु होला । मन्त्री फेरिनासाथ तोक आदेश तामेल गराइहाल्ने खालका सजीवलाई पनि चिनिराख्नुहोला ।
नेपालीको आन्द्रो कति सुकेको छ, नेपाली आमाहरूको अस्मिता भारतमा कति दाममा बेचिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा सेमिनार गर्न इनघुरेट, सुँगुरेट, बङ्गुरेट, हुरहुरेट, टुरटुरेट जस्ता अधिकारकर्मी संस्थाहरूले पनि सम्भव भए विदेशमै नभए पनि सोल्टी, एभरेष्ट, याक एन्ड यति डेला अन्नपुर्ण आदि होटलमै कार्यक्रम गर्न तयार परिरहनु होला । दाताहरूको खोजी गरिरहनु होला । नेपालमा पानी किन पर्दैन भन्ने विषयमा सगरमाथामा मन्त्रीगोष्ठी गरिन्छ भने नेपालमा किन सुख्खा लाग्यो भन्ने विषयमा वासिङ्टनमा मन्त्री भेला आयोजन गर्न कुनै संस्थाहरू तयार पर्नुहोस्, नेपालीलाई किन भोक लाग्छ भन्ने विषयमा जेनेभामा गोष्ठी गर्न तयार पर्नुहोस् । नेपालमा किन बच्चा जन्मन्छन् भन्ने विषयमा टोकियोतिर गोष्ठी गराउनुहोस् । अरु अरुअरु मैले यहाँ नसम्झेका कतिपय विषयहरूमा समेत विदेशमा गएर गोष्ठी गर्न तयार पर्नुहोला, अन्यथा पछि परिएला । डलर अरुले कमाउला ! मन्त्रीहरू फेरिने हल्ला छ, सबै थोकको जोहो गरिराख्नुहोला ।
(बाबुराम भट्टराईको मन्त्री मण्डल फेरिनुभन्दा केही दिन अघि लेखिएको)
लेख समसामयिक विकृति र........
komalprasad.pokharel — Wed, 10/09/2013 - 15:44
लेख समसामयिक विकृति र विसङ्गतिप्रति एक झटारो हो । राम्रो छ ।
म प्रकट हुन सक्दिन